Kitra – «Poule des As» : afa-bela tamin’ny Cosfa ny Elgeco Plus | NewsMada
Kitra – «Poule des As» : afa-bela tamin’ny Cosfa ny Elgeco Plus
Nanomboka, omaly, tany amin’ny kianja Ampasambazaha Fianarantsoa, ny andro voalohany amin’ny lalao mandroso amin’ny «Poule des As». Tsara fanombohana ny Elgeco Plus sy ny Cnaps Sport, izay samy nivoaka ho mpandresy avokoa.
Afa-bela ny Elgeco Plus raha nifandona tamin’ny Cosfa. Resin-dry zalahy, tamin’ny isa tery, 2 no ho 1 ny miaramila. Efa tany amin’ny fiafaran’ny fotoana nefa vao tafavoaka ny Elgeco Plus. Baolina matin’i Dany kely, teo amin’ny 30 s, tsy hiravana. Mbola ry zareo ihany koa no nahafaty ny baolina voalohany, tamin’ny alalan’i Bila, teo amin’ny minitra faha-19. Nosahalain’i Safidy kosa izany, teo amin’ny minitra faha-54.
Teo amin’ny fihaonana faharoa indray, voahaja ny lojika, satria resin’ny Cnaps Sport, tamin’ny isa, tokana 1 no ho 0 ry zareo Hzam Amparafaravola. Nanjakan’ny Cnaps ny lalao ary saika niaro tena fotsiny ry zareo Hzam. Hitohy, rahampitso, ny andro faharoa ka hifampitana ny Cosfa sy ny Hzam ary ny Elgeco Plus hifanandrina amin’ny Cnaps.